Global Voices teny Malagasy » Tafaverina An-tanindrazana: Fandinihana Ny Foko Yadiko Sy Ny Jitómagaro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Marsa 2015 13:33 GMT 1	 · Mpanoratra Ever Kuiru Nandika (en) i Ever Kuiru, Naomy
Sokajy: Mediam-bahoaka, vatsiana
Vaovao farany momba ny Tetikasa nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices
La Chorrera. Sary avy amin'ny tetikasa, nahazoan-dalana.
Rehefa nonina tao an-tanàna Kolombiana tao Leticia  nandritra ny folo taona aho dia nipaka lalina tao amiko ny fiverenana tao amin'ny taniko ao Milan. Nanome hery sy fahazavantsaina ho ahy ny fiverenana tao amin'ny toerana manokana niaviana, mahatsiaro teraka indray aho. Tsapako fa niandry ahy ny olona sy ny faritra iray manontolo.
Na dia efa niverina fanindroany aza aho, niavaka ity dia farany ity noho ny fahatakarako ny [mombamomba ny] foko Jitómagaro. Nampazoto ahy hanampy betsaka araka izay vitako amin'ny asa fanjonoana ny fahitana ny rahalahiko, ny zana-drahalahiko sy ny zanak'anabaviko miasa ho an'ny faritaninay. Rehefa tonga aho dia nipetraka tao an-tranon'ny rahalahiko ary nanomboka nizatra ny zava-misy sy ny manodidina indray. Nanapaka ny firaiketam-poko tamin'ny tanàna aho ary nandray indray ny fitsipiky ny tenin'ny coca sy ny paraky.
Mandeha manjono aho isa-maraina ary misahana ny asa fambolena aho ny tolakandro. Mamboly sy manangona ny vokatra mangahazo, paraky ary coca miaraka amin'ny zana-drahalahiko aho, tahaka ny efa natao nandritra ny taonarivo. Samy manana ny fomba fitantaranay ny kolontsainay ny tsirairay.
Mangahazo. Sary avy amin'ny tetikasa, nahazoan-dalana.
Volana maro izay no lasa, nanomboka niaina indray ny fiainana niainako fony zatovo aho, mahatsiaro ireo ray aman-dreniko sy ray aman-drenibeko, sy ny fanomezan-danja ny faritaninay sy ireo toerana manakasina. Isaky ny alina, miaraka amin'ny rahalahiko sy ny zana-drahalahiko, nipetraka teo amorom-patana izahay ary tamin'ny alalan'ny [fahatsiarovana] ireo fanafody sy ny fiventsoana ny hiranay sy ny vavaka amin'ny fiteninay, nanomboka nahatsiaro ny toro-hevitra sy ny tenin'ireo razambenay izahay. Avy amin'ny dadatoako Calixto izany, naharay vaovao momba ny rafue an'ny yadiko (lanonana lehibe indrindra ao aminay). Ary izany no omeko anao, mizara tsikelikely momba ny teninay sy ny kolontsainay.
Te hisaotra ny ekipanay rehetra aho noho ny fanohanan'izy ireo, ao anatin'ny tantaran'ny fokonay avokoa izy ireo ary na tamin'ny lasa na tamin'ny ankehitriny dia nandray anjara sy nanome lanja ny fahalalana tao aminay:
Ever Kuiru Naforo: mpiteny ny tenim-paritra mɨnɨka, anisan'ny fianakaviamben'ny teny Uitoto avy ao amin'ny faritra Amazoniana Ambony ao Kolombia. Ankizin'ny paraky, coca ary ny mangahazo malefaka aho. Jitómagaro, midika hoe masoandro no foko misy ahy. Avy amin'ny vondrona araka ny lanonan'i yadiko izahay, izay mamaritra anay ho toy ny foko iray ary ny fankalazana ataonay no tianay zaraina amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanasitranana sy ny fandrindrana ny voanteninay. Izaho dia Mpianatra pedagojian'Ineny Tany ao amin'ny Oniversiten'i Antioquia, manampahaizana sy mpihira mɨnɨka.
Laura Areiza Serna: mpianatra fiteny Uitoto, indrindra ny tenim-paritra Mɨnɨka, no nanampy tamin'ny famoahana sy ny fandikana ny teny Uitoto ho amin'ny teny espaniola. Niasa tao amin'ireo fiarahamonina maromaro ao amin'ny renirano Igaraparaná ao Amazona Ambony ao Kolombia sy ny tanànan'i Leticia, ao Kolombia ihany koa izy. Mianatra manomana ny fahazoana diplaoma Master ao amin'ny Fianarana Amazonika ao amin'ny Oniversitem-pirenena ao Kolombia izy ary efa nahazo diplaoma momba ny Haivolana hispanika. Mamorona, manamarina sy manitsy vontoaty izy ary manampy amin'ny fitantanana ny tetikasa. Mpihira sy mpanolo-kevitra ao amin'ny fokonay ihany koa izy.
Misaotra an'ireo mpampianatra Juan Álvaro Echeverri Restrepo avy ao amin'ny Oniversitem-pirenen'i Kolombia, Selnich Vivas Hurtado avy ao amin'ny Oniversiten'i Antioquia ary indrindra Fernando Urbina Ragel avy ao amin'ny Oniversiten'i Colombia izay nampindrana [tahirin-kevitra] noraiketiny niaraka tamin'ny raiko tamin'ny 1989. Manana anjara asa fototra avokoa ny tsirairay avy tao anatin'ny tetikasa
Misaotra an'i Mauricio Granados, mpakasary matihanina izay nandray anjara amin'ireo fitaovana nozarainay.
Ho an'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny foko misy ahy, Juan Kuiru sy ny fianakaviany, Miguel Kuiru sy ny fianakaviany, ny havako, dadatoako, sy ny mpiara-monina izay miara-dalana aminay mandritra ny fombafomba sy ny lanonana.
Hizara hira hafa izahay:
Ny Fiavian'ny yadiko
Inona no atao hoe yadiko?
Lanonana, dihy, hafaliana, sakafo ary finamanana ny Yadiko.
Ny tenin-dray, tsy misy fiandohana sy fiafarana.
Eto ny Yadiko, eo afovoanay, amin'ny lanonana rehetra, izy no lehibe indrindra.
Izy no voalohany.
Mitovy lanja ny lanonana rehetra.
Rehefa nanomboka ny lanonana, atolotry ny raim-pianakaviana amin'ireo zokiny ny fitarihana izany.
Rehefa vonona, Noinui Buinaima.
Abosany amin'ny voambolana rehetra.
Hoan'ny mahasoa ny vahoaka, hampifaly ny rehetra eto an-tany.
Izany no nanomezana azy ny tsara indrindra.
Vita amin'ny kiomina an'ny mpanjaka (zavamaniry manitra) ny fanohanany, ary vita amin'ny volom-bolokin'ny mpanjaka ny satro-boninahiny.
Mena ny voanjony.
Ny tsara indrindra rehetra. .
Tenin-dray, fahasambarana ny lanonan'i yadiko.
Izany no mahatonga ny rehetra mifaly amin'ny lanonana.
Ny fahatsapan-tenan'ny ray, ny fahatsapan-tenan'ny reny, vontoatim-piainana izany.
Izany no izy.
Mbola maro ny vaovao ary zaraiko eto.
Ankizy ao amin'ny fiarahamonina. Nahazoan-dalana avy amin'ny tetikasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/12/68320/